Linux Site ọkọ (LFS): Project ike gị Linux Distros | Site na Linux
Ọ bụ ezie na maka ọtụtụ omiiko Ndị ọrụ Linux, ndị nwere ọkwa ma ọ bụ ihe ọmụma dị iche iche, e nwere otu ma ọ bụ karịa GNU / Linux Distros na-egbo mkpa gị nke ọma, ma na ntọala ndabere ha ma ọ bụ jiri obere usoro iji tinye mgbanwe, ngwugwu, njikarịcha na nhazi dị iche iche, ọ ka bụ eziokwu, na ezigbo pasent nke ndị a na nrọ nke a Nke a na - emezigharị nke onwe ya, ahaziri ya ma wepụta ya na ọkọ maka mkpa gị na atụmanya gị.
Maka ụdị onye ọrụ ikpeazụ a kọwara, ndị nwekwara ezigbo ihe omuma kọmputa banyere Linux, enwere oru ngo a ma ama Linux Site ọkọ (LFS).
N'ezie, ọ bụghị nke mbụ Ndokwa anyị na-ekwu ma ọ bụ na-ezo aka na Project Linux Site ọkọ (LFS), ebe ọ bụ na, n’oge ndị gara aga, gburugburu 6 ma ọ bụ 7 afọ gara aga, na akwụkwọ ndị gara aga anyị emetụtala n'okwu a. Ihe kacha mkpa, na anyị na-akwado iji nyochaa mgbe ha gụsịrị isiokwu a, ha bụ:
Ma ebe ọ bụ na ogologo oge agafeela, anyị ga-eme emelitere nyochaa n'ime ya, iji hụ ihe ọ na-enye ugbu a.
1 Linux Site na ọkọ (LFS): Gụnyere Workets
1.1 Isi ihe mgbaru ọsọ
Linux Site na ọkọ (LFS): Gụnyere Workets
Isi ihe mgbaru ọsọ
Ugbu a oru ngo a kọwara na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị dị ka:
"A oru ngo nke na-enye gị usoro ntụpụ aka iji wuo usoro Linux nke gị, site na koodu isi.
Ọ bụ ezie na okwu ndị ọzọ sara mbara ma zuo ezu, ma na-ehota otu paragraf site n'akwụkwọ anyị ndị metụtara ha gara aga, otu bụ:
"Wayzọ iji wụnye Sistemụ GNU / Linux site na iji aka na-emepe akụkụ niile. Nke a bụ usoro dị ogologo karịa ịwụnye Nkesa Linux precompiled. Dị ka Linux Site Scratch saịtị, uru nke usoro a bụ kọmpat, mgbanwe na nchekwa, nke na-enye nnukwu ihe ọmụma banyere otu GNU / Linux Operating System na-arụ ọrụ ya dum.".
Ugbu a, oru ngo Linux Site ọkọ (LFS) Ọ gụnyere ma ọ bụ gunyere 6 obere ọrụ ma ọ bụ ụzọ, nke na-enye ụzọ ma ọ bụ nhọrọ dị iche iche iji ruo otu ebumnuche ahụ. Ndị a bụ:
LFS: Linux Site ncha o Linux site ọkọ, bu oru mbu nke na-ezo aka na akwukwo isi ma obu usoro mbu, nke ozo, bu isi site na ihe ndi ozo gunyere.
BLFS: E wezụga Linux Site na ọkọ o E wezụga Linux na ọkọ ọ na-aghọta ihe ọmụma dị mkpa maka onye ọ bụla ịgbatị ha okokụre LFS echichi ka a ọzọ omenala na usable usoro.
ALFS: Linux na-akpaghị aka Site na ọkọ o Linux site na ọkọ akpaghị aka na-enye ndị dị mkpa ọmụma na ngwaọrụ machiini ma jikwaa LFS na BLFS rụrụ.
CLFS: Cross Linux Site na ọkọ o Linux si ọkọ crossover -enye ndị dị mkpa ọmụma na-esi nke cross-chikota ihe LFS usoro na ọtụtụ ụdị nke usoro.
hints: Nkọwa okwu hints o Ogwu gụnyere nchịkọta akwụkwọ na-akọwa otu esi emeziwanye usoro LFS gị n'ụzọ dị iche ma ọ bụ ụzọ ọzọ karịa ka akọwapụtara na akwụkwọ LFS ma ọ bụ BLFS.
Ntuchi: Nkọwa okwu Ntuchi o Ihe nkedo na-agụnye ebe nchekwa etiti yana ihe niile bara uru maka onye ọrụ LFS. Ngwunye ndị ọrụ ndị ọzọ na-ebukarakarị na ahụmịhe ndị a na ndị chọrọ ịkekọrịta mmelite ha na ndị ọzọ.
Ruo ugbu a, ọ ga - adịgide maka onye ọrụ ọ bụla ịbanye n'ime nke ọ bụla Usoro LFS na-amalite ịmụta kwuru ihe ọmụma iji gbalịa ewu Linux distro site ọkọ ihe kwesịrị ekwesị ka gị mkpa na njirisi. Agbanyeghị, n'ezie na ọkwa ndị anyị mechara, anyị ga-enyocha ntakịrị ihe gbasara nke ọ bụla n'ime obere ọrụ ndị a.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Linux From Scratch», na-akwụ ụgwọ ma na-emeghe ugbu a iji kwado na onye ọ bụla nwere ike kee GNU / Linux Distro nke gi site na ncha, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Linux Site ọkọ (LFS): Project ike gị Linux Distros
Ejiri m LFS otu oge, mana na njedebe m ehichapụ ya ma gbanwee ya Arch Linux. Gịnị bụ LFS bụ nsogbu iji melite ya, na mgbe ụfọdụ, ịrụzi njehie ga-emepụta njehie ọzọ. Kpachara anya na nke a anaghị m ekwu na LFS adịghị mma, kama na m kụziri ihe ọmụma (N'agbanyeghị nke a) ka ezughi iji zọọ ụdị ụdị ọgba aghara ahụ. Karịsịa ebe ọ bụ na ọ masịrị m ịdị na-emelite sọftụwia emelitere. Ọ bụrụ na ị dị ka m ma chọọ ịnwale LFS, m ga-akwado Arch ịchekwa oge dị ukwuu, ị ga-enwe ike iji LFS mgbe ị matakwu banyere Linux (N'ezie m ga-achọ ịlaghachi LFS otu ụbọchị)
PS: Anaghị m akwado Arch ọbụlagodi na m na-eji ya, mana naanị n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị chọrọ nkwanye bụ ndị ọhụrụ. Iji ndị gị na-agụ nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnwale LFS, Echere m na ị maraworị ntakịrị ihe gbasara GNU / Linux. Ọfọn, ịwụnye LFS n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ụwa a nwere ike ime ka ị pụọ ma ghara ịlaghachi. N'ezie, ikwesighi ịbịakwute Distros ruo mgbe ị dị njikere. Etinyekwala uche gi ime ya! Kwere m! Ama m ihe m na-ekwu!
Daalụ maka Ama ahụ, ejirila m LFS, mana ọ bụghị maka m. Otú ọ dị, m ga-agụ ụfọdụ nke Amalite Ijekọ Ama, na ma eleghị anya na-eme n'ọdịnihu m ga-alaghachi LFS.
Daalụ, Marcelo. Daalụ maka nkọwa gị na ahụmịhe nke gị. O doro anya na ọtụtụ na-ewere dị ka ihe siri ike ma ọ bụ maka ndị ọkachamara, na-eme LFS, agbanyeghị, m ghọtara na ndị nduzi ha zuru oke ma dee akwụkwọ, nke mere na onye ọrụ ọ bụla kwesịrị inwe ike enweghị isi isi ike soro ha leta na iru ebumnobi. Mgbe e mesịrị, anyị na-atụ anya ịbanye n'ime isiokwu a na-adọrọ mmasị.
Ma ọ bụ na LinuxerOS Telegram otu ị nwere ike ịchọta ama https://t.me/LinuxerOS_es